पाँच वर्षभित्र ५० अर्बको बिजुली बेच्दै नेपाल…हेर्नुहोस!::Point Nepal
पाँच वर्षभित्र ५० अर्बको बिजुली बेच्दै नेपाल…हेर्नुहोस!
नेपाल विद्युत् प्रा,धिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्र ४९ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ । हाल झण्डै २० अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भइरहेको बेला विद्युत् प्रा,धिकरणले यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी योजना बनाएको हो ।
विद्युत् प्रा,धिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मका लागि बनाएको कर्पोरेट विकास योजनामा २०७७/०७८ अर्थात् आगामी वर्षदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख छ । चालू वर्षमा विद्युत् निर्यात नभए पनि २०७७/७८ मा १ अर्ब ६ करोड ३० लाख, २०७८/७९ मा ८ अर्ब १८ करोड ३० लाख, २०७९/८० मा १७ अर्ब ५३ करोड ८० लाख तथा २०८०/८१ सालमा २२ अर्ब १३ करोड ८० लाख निर्यात गर्ने योजना प्राधि क,रणको छ ।
पाँच वर्षभित्र प्रति व्यक्ति खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको प्राधि क,रणले पाँच हजार मेगावाट वि,तरण गर्न सक्ने क्षमता पुर्‍याउने यो,जना छ । आगामी वर्षदेखि विद्युत् खेर जाने भन्दै विद्युत् प्राधिक,रणले विद्युत् निर्यातको योजना अघि बढे पनि कसरी निर्यात गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
विशेष गरी सरकारले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका नि,र्माण गरेपनि नेपाल लगायतले भने अझै यसबारे कुनै नीति बनाइसकेका छैनन् । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।